Jaamacadaw Xaal Qaata !!! Ma shahaado Mise Shaxaad? – somalilandtoday.com
Jaamacadaw Xaal Qaata !!! Ma shahaado Mise Shaxaad?
Qalinka umaan qaadan inaan qoraal dheer akhristayaal idinla wadaago balse waxaan jeclayst ay inaan idinla wadaago inamo muuqaalkoodu wacnaa oo sheegay inay ka socdaan urur ay sheegeen inay jaamacadaha dalku ku midoobeen oo shahaado sharaf wax ay ku sheegeen gudoonsiiyay masuuliyiinta baanka dhexe ee Somaliland.
Inamadan ka socday ururkaasi aan kor ku soo sheegay ayaa sheegay inay abaal marin gudoonsiinayaan madaxda baanka dhexe kadib markii ay masuuliyiinta baanka dhexe ay guulo ka gaadheen shaqada baannka.
Waxaan iswaydiinayaa waamaxay wax qabadka ay qabteen ee masuuliyiinta baanka dhexe mudanyihiin in lagu abaal mariyo?
Mid kamida inamada sheegay inay abaal marinta gudoon siinayaan madaxda baanka ayaa sheegay inay maanta wax qabadka lagu abaal marinayo masuuliyiinta ay ka mid tahay fariinta sheegta qiimaha shilinku inta uu marayo maalin walba taasi oo aan sheegin qiimaha uu suuqa ka joogo sarisku ee dhabta ah balse ah fariin aan macno balaadhan lahayn oo laiska diro.
Masuuliyiinta shahaadada lagudoonsiiyay ayaa qiray inayna wax wayn weli qaban ina carwo isagoo madasha shahaadada lagu gudoonsiinayay hadal ka jeediyay ayaa waxaa hadalkiisii kamid ahaa ( wax wayn oonu qabanay oo nalagu abaal mariyaa wali majiro lkn inamadu malaha waxay arkeen waxaanu qaban doono )!!!
Runtii inamadaasi waan la yaabay wax ay la shiryimaadeen, waxaanan is idhi
Ama waa shahaado shaxaad
Ama waxaa ka dambaysa ujeedo kale oo xodxodosho madaxeed ah